Cusboonaysiinta amniga cusub ee macOS Catalina 10.15.7 ayaa hadda la heli karaa | Waxaan ka imid mac
Shirkadda Cupertino ayaa dhowr saacadood ka hor soo saartay nooc cusub oo loogu talagalay isticmaaleyaasha ku jira macOS Catalina. Waa run in aynaan ahayn aqlabiyadda maaddaama kuwani ay yihiin isticmaaleyaal aan haysan ikhtiyaarka ah inay cusboonaysiiyaan nidaamkayaga hawlgalka sababtuna tahay da'da qalabka, si kastaba ha ahaatee adeegsadayaasha “diida” sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay cusboonaysiiyaan iyo Apple kama tanaasusho dadaalkeeda ku aaddan hagaajinta amniga nidaamyada hawlgalka nooc kasta ha ahaadee. Mar kasta oo ay lagama maarmaan noqoto in la cusboonaysiiyo qalabka badbaadada, shirkadda Cupertino ayaa cusboonaysiin doonta.
Cusboonaysiinta Amniga 2021-006 ee macOS Catalina 10.15.7
Markan waa a nooca cusub ee macOS Catalina si loo xoojiyo amniga nidaamka hawlgalka Mac. Noocan cusub waa 2021-006 wuxuu u baahan yahay dib-u-bilaabis si loo rakibo oo kiiskeyga gaar ahaaneed waxay qaadatay waqti gaaban in iMac-keyga la rakibo oo diyaar loo noqdo.
Apple kuma qorto qoraalada faahfaahinta hagaajinta la hirgaliyay en noocyadaan amniga ah laakiin waxay ku talineysaa in la rakibo sida ugu dhakhsaha badan si kor loogu qaado amniga kombiyuutarka si looga hortago khataraha dibadda ee suurtogalka ah.
Mararka qaarkood Apple waxay u bilawdaa cusboonaysiin labalaab ah nidaamka hawlgalka iyo Safari, markan shirkaddu waxay u soo saartaa nooc cusub macOS Catalina, iyada oo dhinac iska dhigaysa biraawsarka Apple oo dhowaan cusboonaysiisay nooca 15. Waxaan kugula talineynaa inaad ku rakibto noocaan cusub ee macOS Catalina 10.15.7 dhammaan adeegsadayaasha ku haysta nidaamkan qalliinka Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Catalina » Cusboonaysiinta amniga cusub ee macOS Catalina 10.15.7 ayaa hadda la heli karaa